ကျေးရွာပေါင်း ၂၄ဝဝ ကျော်မီးလင်းရေး ကျပ်သန်းပေါင်း လေးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော် အသုံးပြုသွား? - Yangon Media Group
ကျေးရွာပေါင်း ၂၄ဝဝ ကျော် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း လေးသောင်းခြောက်ထောင် ကျော် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်ကသိရသည်။ အဆိုပါကျေးရွာများ မီးလင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်အိမ်သုံးဆိုလာ စနစ် (Solar Home System)၊ အသေးစား ဓာတ်အားပေးစနစ် (Minigrid) များကို အသုံး ပြုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦး စီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော်က ”ဒီဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကျေးလက်မီးလင်းရေးအတွက် ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၆၇ ရွာကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့ လျာထားပါတယ်။ ကျေးလက်မီးလင်းရေးအတွက် လျာထားတာကတော့ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၆၇၃၆ ဒသမ ၆၅၃ သန်း အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦး စီးဌာနအနေဖြင့် နောင်လာမည့် (၁ဝ)နှစ်၊ (၁၅)ကြာသည့်အထိ မဟာဓာတ်အားလိုင်း မရောက်နိုင်သည့်နေရာများကို မဟာဓာတ် အားလိုင်းပြင်ပစနစ် (Off-Grid Electri-fication) ကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရသည်။
ဦးခန့်ဇော်က ”ကျေးလက်မီးလင်းရေး ကျေးရွာတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ Off-Grid ဧရိယာမှာရှိ တဲ့ ကျေးရွာတွေကတော့ အများကြီးရှိတာပေါ့။ သို့သော်လည်း သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ တဲ့ကျေးရွာတွေကို ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်အိမ်သုံးဆို လာစနစ်ကို တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူ ထုက ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းထည့်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုပဲ Minigrid များဆိုရင်လည်း ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းဆို ပြီးသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ သတ်မှတ် ထားတဲ့မူတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကျေးရွာတွေကိုရွေး ချယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ ရေးစီမံကိန်း (NEP) ကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိ ပြီး ယင်းကဲ့သို့ဖော်ဆောင်ရာတွင် မဟာဓာတ် အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်ရရှိရေးနှင့် မဟာဓာတ် အားလိုင်းပြင်ပ လျှပ်စစ်ရရှိရေးဖြင့် အပိုင်းနှစ် ပိုင်းခွဲလုပ်ဆောင်နေရာ မဟာဓာတ်အား လိုင်းပြင်ပ ကျေးလက်ဒေသများ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ဦးဆောင်လုပ် ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ကျေး လက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာပေါင်း ၄ဝ၇၄ ရွာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
မြိုင်ကြီးငူ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းသို့ လိုင်ဇာ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့နှင့် အလှူရှင်များက စားရေရိက??